Wonke umuntu uyazi ukuthi "Dota 2" ngeke lubonakale. kwamenyezelwa ngasekupheleni 2010 ukuthi ukukhululwa kuhlelelwe 2011, kodwa ekugcineni iphrojekthi baba sisebenza kuphela ngo-2013. Ingabe lokhu kusho ukuthi umdlalo kwaba iminyaka emithathu ngaphandle isinyathelo? Yiqiniso, akuwona. Ekupheleni kuka-2011, liye umkhankaso lwe-beta elivaliwe ke wanwetshelwa ngokuthumela sengikhiphe izimemo kubangani amaqembu. Khona-ke, i-beta avaliwe salandelwa evulekile, okuyinto eye yaba ukukwazi iqhaza zonke comers. Futhi lapho onjiniyela isinqumo sokuthi konke kwabuye iphucuziwe ukuze esiphezulu, kwakukhona version olusemthethweni egcwele umdlalo, "Dot". Kodwa lesi sihloko, inqubo jikelele lesibili. Lapha, indaba namaqhawe "Dota 2" ezocatshangelwa: indlela uvele umdlalo, owayeneminyaka kuqala futhi kamuva ubani wanezela, Nokho izinhlamvu uphathe Wabasaqalayo kangcono, futhi yini okufanele zithathwe kuphela abadlali abanolwazi nokunye.
Qala yentuthuko: Januwari - April 2011
Ngokwemvelo, lokhu kusho umsebenzi iphrojekthi entsha futhi baqhuba kuze 2011, kodwa lokho izinhlamvu kwaqala ukuvela umdlalo ekuqaleni kwalo nyaka. Lokho indaba namaqhawe "DotA 2" iqala ngo January 2011, lapho isibalo 18 ingezwe Slardar iqhawe. Yiqiniso, kuyisici esihlupha umdlalo futhi namanje scaring zonke izitha ukuba lihle amakhono abo. Ngemva kwalokho, cishe inyanga babesebenza Oqondisa ezikhonjwe amaphutha abahloli, sisungule ezihlukahlukene anezele kanye nentuthuko. Kwakuthinta kuphela ngo-February 12, kwamenyezelwa ukwethulwa inqubo iqhawe elisha - enigma ukuze ufundeke. Lokhu uhlamvu waba nethuba ukudala abanamakhophi abo siqu e nokwenza izitha buthaka futhi ithole enamandla Ulta - ukudalwa umgodi omnyama. Kodwa lokhu kwakuyisiqalo nje ekuqaleni, ngoba ngeviki, onjiniyela ujabulise labo Unezelile iphrojekthi heroes ezintathu - Feysles Igebe, Viper futhi imfihlakalo. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi izinhlamvu zokuqala konke iphathwa Dayr, okungukuthi, ukuba khona amabutho ububi - Rediantom kwaba Tiny kuphela. Igebe ithole ithuba lokuphatha isikhathi (futhi umuntu wayo wokugcina nguye, ngasendleleni, akazange asheshe), i-Viper got a arsenal ocebile ubuthi, kahle, imfihlo inhlamvu engavamile. sibalo sakhe ukhula parallel ukudonsa yakhe, abe more and more - Yebo, ngamunye ongakhetha ungasebenzisa kuzobazuzisa. Mashi waphuma hhayi evundile kakhulu ngokuya izinhlamvu entsha, kodwa Apreli wajabula kanye zifiki ezinhlanu. Kwakumelwe Nature Prophet, Klokverk kanye sniper ngu Good Venomanser nge Dark iduna kusukela Nokubi. Uhlamvu lokuqala uye wathola ithuba ukulawula amandla emvelo, kanti eyesibili kwaba ifakwe inhlendla ekhethekile nenamandla metallic zempi, kahle, kanti eyesithathu - isibhamu ukuthi hits the isitha kahle umuntu ekude. Njengoba for izinhlamvu amnyama, yonke into ilula - Venomanser elixutshwe izici poisoner, futhi umlozikazana, futhi Dark PHROFETHI usebenzisa amandla akhe zobuqili kusuka esinye isici. Yiqiniso, indaba namaqhawe "DotA 2" akugcini lapho - kungcono kumane kuyisinyathelo sokuqala, kufanele kulandele ikusasa abaningi.
Bulk engeza zinhlamvu: May - Julayi 2011
Kusukela ngoMeyi waya ukwanda mass izinhlamvu - amaqhawe emlandweni "DotA 2" isibe olujulile kakhulu. May 20 kwanezelwa Pugna futhi Beastmaster - umlingisi wokuqala amakhono enamandla ekwazi sina ukulimaza isitha, futhi sakamuva singabangela mema izilwane ezihlukahlukene okwamanje ukunakekelwa. Ngaphansi kuka ngesonto, njengoba e "DotA" yavela ngaphezulu abalingiswa abathathu - Shadow Fiend, Enchantress futhi Leshrak. Okokuqala, kwencazelo okubi, ine ukumuncwa ikhono eshaweni, ukuze uwasebenzise ekumelaneni nesitha, kwesibili - kunalokho, nakanjani ezinhle ezingaba enchant futhi wenze amakhophi. Ngokwazi Leshraka, kuba ngokuphelele Enchantress. Iphinde isebenzisa amandla emvelo, kodwa okubi, ubhubhise futhi ukubulala, futhi ukuletha ngokwabo bayazuza. Ngo-June, isimo kancane washintsha - esikhundleni esikhulu izibuyekezo Onjiniyela ukugxila amancane, kodwa baba ezinkulu nakakhulu. Futhi zonke buyekeza uzoqala play umlingisi omusha. I Tinker lokuqala ingezwe, ingabe cha possess phi amakhono akhethekile, kodwa asingathe kahle izikhali. Ngemva kwakhe kulandele Weaver - efana isidalwa ibhungane, esesikhundleni ijubane Amazing nokushesha. Bese kuba khona ingezwe Knight Stalker - omunye ubufakazi bokuqala bokuthi isikhathi ushintsha sosuku entsha "Dote 'kuzokwenza umehluko omkhulu.
Ngo-June 17, it wadedelwa buyekeza umxhwele nakakhulu, okuyinto wanezela izinhlamvu ezimbili nje - a Enshent Umbono futhi bohlu. Bobabili Izinhlamvu amabutho amnyama, kuphela Waqale wanqoba ngokuphelele element of ice, kanti eyesibili ngosizo angababulali Spectral ukwazi kweso teleport ukuze isitha sakho ukuze uhambise umbani ukuhlaselwa esikhohlisayo. Nokho, ekupheleni kwenyanga kwenzeka omunye buyekeza, kulindeleke ngabaningi - umdlalo has a uhlamvu okuthiwa Doom Owehlisela. Lokhu iqhawe kungaba ukushwabadela aqala yabo leyabanye, iziqalekiso waphonsa nokwakha imvula tshwala. Kubukeka umxhwele, futhi bakhulume ngaye uya isikhathi eside impela.
Ngemva kwezinyanga ezimbili ezifana elihlale ngoJulayi, kwakukhona umlingiswa omusha oyedwa kuphela - Chen. Uyakwazi niwunqobe izilwane zabo futhi uzosebenzisa amandla ukholo lwabo ukuze kuzuze amabutho oMfelandawonye. Kwathi ngolokuqala Julayi, bese wenza isibukezo izinhlamvu ezisele kusukela kwakhululwa ingxenye yokuqala ye "DotA", kanye kakade. Ngakho, ngo-"DotA 2" Amaqhawe Wabasaqalayo - bonke ababengaphambi ekuthuthukiseni engxenyeni yesibili. Phela, seluvele isiqondiso esithile futhi ngolwazi olwanele. izinhlamvu okusha - lena isihloko ekutadisheni abadlali ngesikhathi beta.
Qala-beta: Agasti - Novemba 2011
Agasti wafakwa ngokuphelele onjiniyela phezu ukulungiswa kwamaphutha, ngakho kwakungekho yiziphi izinhlamvu entsha mdlalo "DotA 2". Heroes Wabasaqalayo musa ukugqama kulokho kuphumula, njengoba nabo benza imisebenzi uyinqaba futhi kuhlukile kulokho eyayiyikho engxenyeni yokuqala. Septhemba futhi kwenzakala ukulayishwa ngokuya ukuhlolwa nokulungiswa kwamaphutha, ngakho kule nyanga kuphrojekthi uvele uhlamvu entsha eyodwa kuphela - ibutho elinamandla. LWELI Rediantov ayenalo okuzenzela lwakhe olukhulu iphuma, babesuka abaphikisi abaphikisi ngesivinini esikhulu futhi ukubhekana ngayo amagalelo kwasani. Kodwa ngo-Okthoba, onjiniyela waphinda setha mayelana nokudala izinhlamvu, futhi ingxenye yesithupha ye-game has Kunkka futhi Bladsiker. Esokuqala kwaba original knight pirate elwa ohlangothini omuhle, kanti eyesibili - izidalwa ezimbi ebumnyameni, ukulungele baphuze igazi lanoma yiluphi counterclaim. Ngemva kwalokho, le phrojekthi sathunyelwa hero Costa Rica, okuyinto Assassin okumsulwa - wamane wazithulela ingena empini, ehlasela izitha ezingemuva futhi zinyamalale. Khona-ke sekuyisikhathi uthuthukisele Dair umxhwele - ohlangothini ebumnyameni weza izinhlamvu ezintathu: Brudmazer, Queen of Pain kanye Skeleton King. Uhlamvu lokuqala - umama spider, okungase ukudala web aminyene okunamathelayo, kanye lapho kucelwa usizo izingane zabo, kanti eyesibili - kuyinto Succubus, okuyiwona ukuphila - kungcono ubuhlungu, futhi ubuhlungu babanye, futhi wakujabulela nezimbangela zayo. A uhlamvu lwesithathu - lwamathambo, ngubani elihlanyiswa nenkanuko ukubulala. Ngokuvamile, inkampani uye agcwaliswa izinhlamvu elibi elinamandla.
Kodwa kule nyanga ayizange yaphela - omunye update enkulu uye kulethwa ngokudlala Betraydera, Juzcar futhi Yakir. Okokuqala, waphendukela obubi, njengoba kusobala igama layo, ohamba phezu ilulwane uyakwazi ukuntshontsha isitha kude, lapho ezobhekana naye ubuso nobuso. Esesibili - elinesibindi onesifo ikhono lokuthola amandla avela nobuhlungu bakhe, bese ujike ukuphila esitha ukuhlupheka yangempela. Okwesithathu - dragon amakhanda amabili, enye yazo spews ilangabi, elinye - ice. Lapho Novemba sifika, onjiniyela awazange wanelisa. Novemba 3 bathunyelwa okhiye-beta avaliwe, futhi ngesikhathi esifanayo kuphrojekthi, kukhona abadlali ababili ezintsha, Dragon Knight futhi Omninayt. Omabili ahlala avela ohlangothini omuhle, munye kuphela - knight ngegazi dragon sika, kanti eyesibili - a paladin ejwayelekile abakwaziyo inkemba ukuhlasela futhi aphilise umbimbi. Kakade ngokuhamba ukuhlola mdlalo futhi yengeziwe Warlock futhi Alchemist. Eyokuqala ungumpetha magic amnyama, ikhono ukuze kunxuswe Golem omkhulu, kanti eyesibili - isazi abanamakhono ku potions, okuyinto ekade ikhwela kulo nelifakwe ihlombe Ogre. Yilokho umdlalo obungajwayelekile baba "Dota 2". Izithombe heroes, yebo, yaqala ukubonakala kunethiwekhi, futhi bonke bajabula ngokukhululwa kwenzekeni iphrojekthi entsha. Kodwa intuthuko ngeke ayeke noma ukubambezela.
Disemba 2011, January-February 2012
Ukuphela konyaka kwaphawulwa yokuthi izinhlamvu ezine engezwe ku-umdlalo "DotA 2". Photo namaqhawe kweso yabonakala izinsiza ezifanele, ngakho-beta avaliwe kancane kancane abe esiphelelwe isikhathi, futhi onjiniyela baye baqala ukuhlela kwathatha inketho evulekile. Njengoba for abalingiswa, kwaba Layfstiler, Ukufa Prophet, Ursa futhi Bounty Hunter. Njengokuvamile, kwanezelwa kuzibuyekezo ahlukene, kodwa ukuze ecacisiwe ngenhla. Layfstiler udla izitha zakhe, Ukufa Prophet - kuyinto Analogue of ghost owaziwa Banshee, Urs - indoda-bear, iqhawe elinamandla futhi Umphikisi ezinkulu, Bounty Hunter - umzingeli bounty ehlanganisa nokwakheka kanye karate.
Unyaka omusha wawuqala neqiniso ukuthi "Dote 'lalingesinye uhlamvu ezine ngaphezulu inkambo izibuyekezo ezintathu ngo-January. Okokuqala wajoyina inkampani uMoya Full futhi Silencer. Omunye wabo wafika evela kwelinye izwe, uyakwazi ukuhambisa ngendlela emangalisayo ngokushesha, ukucekela phansi yonke into endleleni yayo, kanye nezinye sigxila ekuboniseni indlela ukuphuca nezitha amathuba inkatho ngeziphonso namakhono ukusetshenziswa. Bese kuba khona ingezwe Invouker esiqine wizadi amnyama, owazi inombolo enkulu iziphonso. Esikhathini esingangenyanga igcwaliswe ngokungeza Klinktsa amangalisayo. Lokhu umcibisheli izinyo lendlovu, ambozwe in flames, futhi bafune impindiselo. Lo mdlalo kancane kancane yazuza yokulinganisela, aluthola ukufana ukuthi afuna ukumnika onjiniyela, ngakho inzuzo ukuthi kancane slackening - ngo-February, okwabonwa zomphakathi umlingiswa omusha oyedwa kuphela - Autvorld Devaurera, ubuhlakani villain obheka yena ngobuchule ngaphandle abanye abantu futhi ufuna boke dumber yena . Lapha enjalo nangu Ukubuyekeza of the amaqhawe "Dota 2". abalandeli beqiniso chungechunge ukwazana lokhu, kodwa zifiki kungase kuthakazelise kakhulu, njengoba kwakunjalo izinhlamvu abawuthandayo kule game.
Mashi - Meyi 2012
Kodwa akunakwenzeka ukumisa le Ukubuyekeza namaqhawe "Dota 2", ngoba nigcwele. Bese wengeza kubo ngokushesha, kodwa kancane kancane. Ngokwesibonelo, ngo-March 2012 kwaba khona uhlamvu unique amane kuphela, futhi owokuqala phakathi kwawo kwakukhona Bane. Lokhu bili amnyama uyakwazi ukufinyelela ukwesaba kwakho enkulu, ukudoba kubo futhi wasebenzisa kuwe. Bese kuba khona ingezwe Shadow Demon - omunye amakhosi Hogo umhlala uyakwazi nakastovat omningi iziphonso amnyama. Ngemva kwakhe kwavela Lycan - shapeshifter okubi ezingenza abe impisi kanye ukuhlasela izitha kuleli fomu. Nokho, uhlamvu lokugcina Mashi - Lone Druid, engesiyo werewolf, kodwa uma sinobuhlobo obuqinile ibhere, ogama amandla futhi isebenzisa empini. Ngo-Ephreli, onjiniyela futhi kwaba nekhefu kudalwa izinhlamvu, ngakho kuphela Bryumaster ingezwe, le elikulesi, engaphansi amponjwana livele ayo ekhethekile yokulwa isitayela. Kwangathi futhi ubuyekeze eziningi abadlali ukukhumbula ukuthi "Dote yavela esitolo. Kodwa bambalwa abantu khumbula ukuthi kwaba kule nyanga e umdlalo izinhlamvu ezifana kwanezelwa, njengoba Phantom Lancer, treants Umvikeli Ogre Mage. Ijubane lokuqala Amazing kudala inkohliso bebodwa, wesibili lifihle ehlathini ukuhlasela izimpande, ngokulinganisa ukuhlinzeka nabalingani bayo abangaphezu kuka ungqimba zempi, kahle, kanti eyesithathu - kuyinto ogre ngubani kahle kudwetshwe nge magic umlilo owavele isebenzisa ngokumelene nezitha zawo. Zonke lezi zinhlamvu - okuhle, futhi abaningi bakholelwa ukuthi "Dota 2" heroes ezinamandla kakhulu kukhona ukuKhanya. Kodwa ke umuntu angekhe atjho, ngoba into ebaluleke kakhulu - kungcono amakhono akho. Futhi uma ziqondiswa kahle ngohlamvu amnyama, ungahlala sinqobe ukukhanya.
Juni - Septhemba 2012
Njengoba kwavela umbuzo ukuthi yini "Dota 2" heroes ezinamandla kakhulu, hhayi ngokushesha bathi Unga cinga naphakathi kwalabo angeziwe nephrojekthi ehlobo lika-2012. Iqiniso lokuthi le nkathi wayenothile kakhulua, izinhlamvu. Ngasekuqaleni kwale nyanga, kwenzeka isibuyekezo ezinkulu, okuyinto wanezela nje 3 namaqhawe - Knight Chaos Girokoptera kanye Phantom Assassin. Ngaphezulu kweviki badlula phambi kwakukhona isibuyekezo esisha nomunye iqhawe - kulokhu Rookie baba Rubik. Futhi ekupheleni kwenyanga kule game, kukhona uhlamvu ezimbili namanje engavamile, okuye leli enkazimulweni kulo lonke khona yephrojekthi - Luna futhi Io. I ngenyanga ezayo yayingekho ngaphansi elithelayo. Kakade owesihlanu July banikezwe disruptor futhi Andaing. Ngemva kwesonto, lapho nakho kwaba Templar Assassin, kanti ngemuva kwenye ngesonto - Naga Sirens. Kodwa lokho kwakuseyisiqalo nje - ekupheleni kwenyanga, kwafika buyekeza big, okuyinto langena umdlalo namaqhawe ezintathu nje - Nyx Assassin, umgcini Of Ukukhanya Viseydzh. Ngemva nensada ezinjalo, August izindleko ngaphandle noma yikuphi ukuthuthukisa, Septhemba lakhunjulwa kuphela ukubonakala isidalwa eziyinqaba okuthiwa IIST. Yiqiniso, lena akuyona umlingisi best "DotA 2", kodwa inawo pluses yayo. Futhi okungcono bona, ngamunye uchaza uqobo.
Ukuphela konyaka: Okthoba - Disemba 2012
Njengoba kwaba sobala kamuva, ehlobo lika-2012 yayiwumsebenzi owumphumela wawo abalingiswa kule indaba ephathwayo "Dote '. Ngemva kwalokhu kwalokho sesiqhubeke komnotho. izinhlamvu okusha avele njalo, kodwa ngezikhawu eside futhi kancane. Yiqiniso, ngendlela ababukeka ngayo, futhi, kufanele wazi - mhlawumbe phakathi kwabo kukhona uhlamvu kangcono "DotA 2" kuwe. Ekuqaleni kuka-Okthoba, izwe wabona Magnus, futhi esiphethweni sakhe Ujoyinwe Centaur Varraner. Ngo-November, ngemuva konyaka kwethulwa "DotA", okokuqala e-beta ingezwe ku-Stark, umcimbi awuzange yaqondaniswa nge suku olwaba olubaluleke kakhulu - hero wafika 15. Kodwa ngaphambi onyakeni omusha, phakathi no-December, onjiniyela esenzelwe wabadlali kanye isipho ethulwa Timbersou, uhlamvu ngempela yasekuqaleni futhi umxhwele. Kodwa abaningi banesithakazelo hero entsha "Dota 2" - Oracle. Kungani kuze kube manje akazange abe izwi ngakho? Ungase ube into yaphambanisa, ngoba Oracle uvele omunye izibuyekezo zakamuva ngo-2014 - ngakho-ke ivuliwe, kodwa manje sikhuluma ekupheleni 2012 nezinhlamvu zokuqala.
Onyakeni omusha - elinezinhlamvu entsha: Januwari - Mashi 2013
Njengoba kushiwo ngaphambili, ayisekho emehlweni azikho izibuyekezo omkhulu kunothile uhlamvu. ngokushesha Onjiniyela "DotA" wamemezela ukuthi ngenyanga izovela eyodwa ngesikhathi, nge esiphezulu zifiki ezimbili. Yingakho iqhawe elisha "Dota 2" Oracle wafika sekwephuzile ngakho - izinhlamvu eziningi kakhulu ukuba avele phambi kwakhe. Kuyinto ngazo manje futhi kuzoxoxwa. Ekuqaleni kuka-January, kwenzeka isibuyekezo, elaba jellyfish umdlalo, kwalandela ekupheleni kwenyanga kulandele Troll Umkhuzi. Phakathi no-February Ngingeze elinye iqhawe - Tusk, kodwa Bristlbeka kwadingeka alinde kuze kube sekupheleni kuka-March. Kodwa abadlali baye kwadingeka ukwenza okuthile - abanazo, baningi abalingiswa, ukuze ziboshwa ezintsha kwakungamadoda nje ibhonasi nice, okuyinto yandisa kakhulu yonke yalo mdlalo. uhlamvu ngasinye esisha e "DotA 2" wayesalokhu iholide, lapho abadlali sasilangazelela.
Ukuthuthukiswa: Apreli - Julayi 2013
Ngokwemvelo, lokhu kusho onjiniyela nje aphonswe iphrojekthi yakho - banesikhathi esengeziwe ukuze sibuyekeze kwamaphutha Lungisa ibhalansi nezinye izimo ezifanayo. Ngakho-ke, lo hero ezilandelayo ezintsha kule "DotA 2" - Skayvrat Mage - waphinde yedwa isithasiselo sakhe, kodwa futhi isibonelo sokuba yomunye wabalingiswa ishintshile nalo, futhi eziningi nezinye emisha ingeziwe izinhlobo izithombe. Meyi 2 udlala komphakathi Waselinda iqhawe elisha - Titan uMdala. Kodwa ke usephumile ezihlukahlukene ngcono okukhulu, izithuthukisi kwamaphutha, futhi omunye umlingisi uvele kuphela ngo-July 12 - kwaba Abhadoni. Kakade ngaleso sikhathi, ukuhlolwa wonke amaqhawe "Dota 2" kuthatha omningi ngesikhathi. Kodwa uhlamvu omusha ngamunye isazoqhubeka ukuletha bezinga elingakaze libonwe kumnandi.
Kuze kube sekupheleni 2013
Novemba 14 - ke ayelapho izinhlamvu ezimbili ezilandelayo. Gamers kwadingeka alinde isikhathi eside kakhulu. Kungakanani uyakhumbula update lokugcina okuletha umlingisi omusha, kwenzeka izinyanga ezingaphezu kuka ezine edlule. Ember sikaMoya nesamandla yesiza uMoya - abenze ukuvivinywa wonke amaqhawe "Dota 2" lisabalele nakakhulu. Disemba abasebenzisi 10 balinda isimanga kancane - umdlalo wanyamalala Skeleton King. Wonke umuntu wayelindele kuzokwenzekani, kodwa isibalo 12 ingezwe iqhawe elisha - Legion Commander. Kungazelelwe, ngo-December 13 kwenzeka i twist engavamile - Skeleton King waphindiselwa umdlalo, kodwa kamuva eyethiwa ngokuthi u Gate WeNkosi. Njengokulindelekile, bonke textures animations ashintshiwe, kanye nekhono of the hero. Ngakho, Skeleton King isibe omunye labo ababizwa ngokuthi "Amaqhawe angakhishiwe" Dota 2 "."
Ngeshwa, 2014 abakwazi ukuqhosha inala izinhlamvu ezinkulu entsha. namaqhawe Unreleased "Dota 2" - kuyinto isihloko ehlukile ngxoxo, kodwa izibalo zakamuva - uyinto mnandi. Januwari 29 kwanezelwa ngesikhathi esisodwa ezimbili izinhlamvu - Terrorbleyd nePhoenix, okwathi ngemva kwalokho onjiniyela ukuthi ngokushesha nje zifiki phakathi namaqhawe is akulindelekile. Ngakho uma ufuna ukudala siqu namaqhawe akho phezulu "DotA 2" Khona-ke ungakwazi kalula ukukwenza - ubungeke ube ukuqedela isilinganiso eziningi izinhlamvu. Nokho, ngo-September 4, onjiniyela kufanele abadlala uyajabula waphinda, okwenezela umdlalo Tekis - imfundamakhwela eside elindelwe. Dala Hero "Dota 2" Manje - kungcono inqubo real nzima ngalo Abadali emuva kaningi. Kodwa ngo-November 2014, they nzonzobala wakwenza, futhi wabona ukukhanya uhlamvu lokugcina samanje - Oracle. Hero "Dota 2" wazalwa ngo Novemba 20, futhi kusukela ngaleso sikhathi akukho izibuyekezo kwakungafanele namaqhawe. Ngakho-ke, abadlali badinga kuphela ukudlala bese ulinda izindaba. Nokho, bakwazi ukuzinqumela ukuthi yini izinhlamvu "DotA 2" kangcono, futhi yiziphi mubi kakhulu. Lo mlando olufushane luye abajwayelene ngendlela abalingiswa avele umdlalo, futhi ngemva iphrofayela ngayinye has indaba yayo siqu ezweni fantasy "Dota 2".
Indlela ukukhetha iqhawe? Lena kakade isinqumo sakho ukuthi kufanele uthathe owakho. Ungakwazi ukufunda umlando omfushane, bheka Hyde letehlukahlukene uhlamvu oluthile, ukwazi lokho anakho izimfanelo ethile nobuthakathaka ngalokho okubeka kungcono ukuhlomisa nokunye. Futhi ngesisekelo ulwazi wathola futhi angayithandi siqu, ungakwazi kakade wenze ukukhetha unolwazi kakhulu. Futhi kulesi simo ungase kahle ukusiza lapha Yindaba lapho kancane, kodwa wathi mayelana uhlamvu omusha ngamunye kule mdlalo.
Indlela ukuze usethe i-satellite dish nge kube nomphumela omuhle kakhulu